‘मलाई कस्तो चकलेट खान मन लाग्यो दिदी,’ अग्रज उठेर दिदीका नजिकै आए ।‘हजुरआमाले भर्खरै पेटभरि खाजा खुवाउनुभएको होइन ?’ अझै पनि भाइतिर नहेरी उपासनाले भनिन् ।‘तर चकलेट दिनुभएन नि ।’‘सकियो होला ।’
‘कहाँ सकिनु त्यत्रो एक बट्टा चकलेट ?’ अग्रजले दिदीलाई सम्झाए । धेरै चकलेट खानु हुन्न भनेर आमाले दुई/दुईवटा उनीहरूलाई दिएपछि बााकी चकलेट त बट्टामै राख्नुभएको थियो । उपासनाको मन पनि लोभियो ।दुवै दिदीभाइ खेल्न छोडेर भान्सातिर लागे । दराजको खापा उघारेर खोजे । र्‍याकमा लस्करै मिलाएका बट्टा खोलेर खोजे । बट्टा खोल्दा हर्रर मसलाको बासना चल्यो तर चकलेट भेटिएन । अग्रजले रुन्चे मुख लगाएर शंकालु आँखाले दिदीतिर हेरे, ‘मलाई नदिई सप्पै चकलेट तिमीले मात्र खायौ ?’
‘कहाँ मैले खानु ? बरु मलाई नदिईतिमीले पो खायौ कि ?’ उपासनाले पनि भाइलाई सोधिन् ।
हजुरआमा भान्सामापुग्नेबित्तिकै फर्किनुभयो ।
‘चकलेटको बट्टाचाहिा कसरी झिक्यो होला त बिरालोले ?’ हजुरामाले केही सोचेझैं गर्नुभयो ।‘एउटा कुर्सी तानेर दराजनेर ल्यायो होला अनि त्यसमाथि चढेर कुचोले धकेलेर निकाल्यो होला नि आमा,’ अग्रजले जवाफ दिए ।‘ओहो ! कति बाठो बिरालो रहेछ । अब देख्यौ भने मागेको भए त म दिइहाल्थें चोरी गर्नु पर्दैनथ्यो भन्नु है त्यो बिरालोलाई ।’
‘आमा मैले नै दिदीलाई चकलेट खाने भनेको थिएँ । हामी दुवै जनाले मिलेर निकालेको हो,’ अग्रजले पनि हजऽरआमालाई अँगालो मार्दै अँध्यारो मुख लगाएर भने । उपासनाले सोफाको पछाडि लुकाएको चकलेटको बट्टा हजुरआमाको हातमा दिइन् अनि अबदेखि यस्तो गल्ती नगर्ने वाचा पनि गरिन् । अग्रजले पनि दिदीकाकुरामा सही थपे । दुवैले साँचो कुराबताएकाले हजुरआमा खुसी हुनुभएको थियो । उहाँले एक/एकवटा चकलेट निकालेर दुवैका हातमा राखिदिनुभयो ।
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७५ ०९:१२
मंसिर ९, २०७५ राजाराम पौडेल
काठमाडौँ — हरेक बालबालिकासँग फरक प्रतिभा हुने गर्छ । अवसर पाए उनीहरूको प्रतिभा प्रकट हुन्छ । अवसर नहँ‘दा प्रतिभावान् बालबालिकाले पनि आफ्नो क्षमता देखाउन सकिरहेका हुन्नन् ।
यही तथ्यलाई ख्याल राख्दै पोखरमा लिटल मेगा टयालेन्ट कन्टेस्ट २०७५ आयोजना भएको छ । प्रतियोगितामा ७ वर्षदेखि १४ वर्षसम्मका बालबालिका सहभागी भए । अडिसनमा सहभागी ५० जनामध्ये २० जनालाई छानेर एक महिना तालिम दिइएको थियो । तालिमपछि हालै फाइनल प्रतियोगिता भएको हो । फाइनल प्रतिस्पर्धामा प्रतियोगीहरूले चित्रकला, नृत्य र गायन विधामा आ–आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रतियोगिताको निर्णायकमा फेसन कोरियोग्राफर आर्यन कुँवर, संगीतकार नरेश गुरुङ, कलाकार सुदिन श्रेष्ठ, नृत्य कोरियोग्राफर निरज राई भाट थिए । उनीहरूले प्रतियोगीका हरेक गतिविधि नियाल्दै विजेता छनोट गरेका थिए ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत आर्टतर्फको उपाधि नागढुंगा पोखराका निश्चल थापाले जिते । ११ वर्षीय निश्चल कक्षा ५ मा अध्ययनरत छन् । उनलाई चित्र बनाउन र गीत गाउनमा रुचि छ । नृत्यतर्फको उपाधि बीपी मार्ग चाउथे पोखराकी निलिशा गुरुङको पोल्टामा पर्‍यो । ७ वर्षीय उनी २ कक्षामा अध्ययनरत छिन् । भविष्यमा गएर सफल डान्सर बन्ने उनले बताइन् । नृत्यसँगै आर्टमा समेत उनको रुचि छ । गायनतर्फ लामाचौरका सुमित नेपालीले बाजी मारे । ११ वर्षीय सुमित ६ कक्षामा पढ्छन् । गायन क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएका उनको नृत्यतर्फ समेत रुचि छ । सारेगम इन्टरटेन्मेन्ट हाउसले पोखराको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा भ्युअर च्वाइसको
पुरस्कार पृथ्वीचोकका मिराज पुरीले जिते । गायक बन्ने सपना बुनेका १३ वर्षीय उनी ६ कक्षामा पढ्छन् । उनी संगीत पनि सिक्दै छन् ।
विजेतालाई विश्वका कान्छा ड्रमरको रूपमा रेर्कड राख्न सफल उत्प्रेम जोजिजुले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । विजेतालाई ट्रफी, गिफ्ट हयाम्पर र प्रमाणपत्र प्रदान गरियो । बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले प्रतियोगिताको आयोजना गरेको सारेगम इन्टरटेन्मेन्ट हाउसका व्यवस्थापक सुशील नेपालीले जनाए ।
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७५ ०९:०६